နီဇူလိုင် – “ထုံကူးပွဲ” | MoeMaKa Burmese News & Media
နှင်းနဲ့ မြူ. မသဲကွဲတဲ့ ဖေဖော်ဝါရီလ..
ကျောင်းသားရဲဘော် ကိုအောင်ကျော်ကို မွေးဖွါးခဲ့။
နောက် …ကိုးဆယ့်ကိုးနှစ် အကြာ
မြင်းခွါတချက် ပေါက်ရင် မီးဟုန်းဟုန်း တောက်စေ့မယ်ဆိုတဲ့
မီးလျှုံထဲက ကြာ တပွင့်ပမာ.. ..
ဒိုးဒိုးဒေါက်ဒေါက် ကမ္ဘာ့တံခါးကို ခေါက်နိုင်တဲ့
“မခင်မြ(ခင်မျိုးချစ်) ” လည်းပါတယ်..။
လမ်းမထက် ကျတဲ့ သွေးတွေ..ပျောက်ပျက် မသွားသေးကြောင်း
ကမ္ဘာမကြေဘူးတေးနဲ့ အဖိုးမှိုင်းကို တ
သမိုင်းလှိုင်း တစ်လုံး အကပ်
တို့မြို့ လေးရဲ့  နိုင်ငံရေးသိက္ခာထပ်ပွဲပ
သူတို့ခြေဖ၀ါးတွေနဲ့ တို့လက်ဖ၀ါးတွေ တသားတည်းကျလို့။
ဒေါင်းအလံတွေ ကောင်းကင်တခွင်လုံး နီလို့
ဒေါင်းတမန် တောင်ပံခတ်သံကြားမှာဖိနှိပ်ခံ လူထုရဲ့ 
အဖိုးမှိုင်း နဲ့ ကိုအောင်ကျော်
ဖိနှိပ်ခံလူထုရဲ့  တိုင်တန်းသံတွေကို နားစွင့်
မတရားဖိနှိပ်သူ အာဏာရှင်တွေ ရှိနေသမျှ
မခြောက်သေးတဲ့ ဖိနှိပ်ခံတွေရဲ့ သွေးစက်တွေဟာ
သူတို့ရဲ့  ဆဌမအာရုံမှာ .
“အော် အထက်နဂိုက ပျက်ပြို လို့ ကျခဲ့တဲ့
တြင်း, န၀င်း ကောင်းမျိုးအထွေထွေ..။
အိုကွယ် တက်မကွ အတင်းဟေ့လို့
မီးဟုန်းဟုန်း တောက်စေရမယ် ဆိုပေမယ့်
“ငါ့ဦးခေါင်းသည် သွေးချင်းချင်း နီသော်လည်း..ဘယ်တော့မှ မညွှတ်” လို့
ရန်သူတော့ မဖြစ်စေနဲ့ပေါ့ကွာ” လို့
“မိတ်ဆွေကိုလဲ ရန်သူမဖွဲ့ပါနဲ့” လို့
သောကမကင်းစွာ ပြင်ဆင်ချက် ထုတ်ရှာတယ်..။
အောင်မြေဗိမာန်မှာ ငါရှိနေမယ်..” တဲ့။
စစ်ဘီလူးတွေရဲ့  ကတိသစ္စာတွေဟာ အပိုင်းပိုင်းအစစ ကြေမွ။
ဓမ္မနဲ့ အဓမ္မ ဟာ ပြတ်ပြတ်သားသား စည်းခြားကြ။
ကိုဗဟိန်းဟာ တဟုန်းဟုန်း လင်းလက်တောက်ပလို့။
မှိုင်း ဆန်း အောင်နဲ့ အောင်မှိုင်းဆန်းများ ဟာ
နေကို ရဲရဲကြည့် ရပ်သတဲ့။
သတ္တိ တဖြောင့်တည်း မတ်ကြတယ်..။
ဒေါင်းဝိညာဉ်တွေ အဆက်ဆက် ထုံကူးရင်း
ကိုအောင်ကျော်တို့ ရှိနေမှာ မဟုတ်ဘူး..။
အမိတက္ကသိုလ်တွေရဲ့  ဒေါင်းရင်ပြင်တွေမှာ
နီဇူလိုင်ဖေဖော်ဝါရီ ၂၂၊ ၂၀၁၆
(သာယာဝတီရုံးထုတ်က ကျောင်းသားတွေ ရုံးထုတ်တိုင်း ကဗျာတပိုဒ် စပ်တယ်..။သူတို့ကို ကိုယ်တတ်အားသရွေ့ ..အားပေးချင်။ ဒီနေ့တော့ ဒီကဗျာကို ဒီမှာပဲ ရပ်ချင်ပါပြီ။ နောက်တပါတ် … နောက်တပါတ်တွေမှာ သူတို့ လွတ်မြောက်တာပဲ မြင်နိုင်သင့်ပါပြီ)